Thursday .9April . 2020
ဆင်တုပ်ကွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် အချက်များ
ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး ခြင်ကျားအကိုက်ခံရရာမှ တဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါတမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၆၀) ကျော်တွေင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ခြင်ကျားပေါက်ဖွားမှု များပြားသော နေရာများတွင် ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားရန် အခွင့်အလမ်း ပိုမို များပြားပါသည်။
ဆင်တုပ်ကွေးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ မောပန်းအားနည်းခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင် အနီကွက်များ ထွက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်များ ကိုက်ခဲခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သည့် ခြင်ကျား အကိုက်ခံရပြီး နောက် (၃) ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ စတင် ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါသည်။ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲအနေဖြင့် မျက်စိ၊ အာရုံကြော၊ နှလုံးတို့နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ လက္ခဏာများလည်း ခံစားရတတ်ပါသည်။ ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ၏ လက္ခဏာများသည် အခြားခြင်ကျား အကိုက်ခံရရာမှ တဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများဖြစ်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ဇီကာ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူပြီး မှားယွင်း နိုင်ပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အများစုတွင် ရောဂါပြင်းထန်လေ့ မရှိဘဲ ရက်သတ္တပတ် (၁) ပတ်ခန့်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ အားလုံး သက်သာပျောက်ကင်းကြသော်လည်း အချို့တွင် အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို လနှင့် ချီ၍ ခံစားရနိုင်ပါသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချီုရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ အစရှိသည့် နာတာရှည် ရောဂါ အခံရှိသူများတွင် ရောဂါ ပြင်းထန်နိုင်ပါသည်။
ဆင်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသည်ဟု သံသယရှိပါက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ကုသမှု ခံယူပါ။ ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာစေရန်အတွက်သာ ကုသမှု ပေးနိုင်ပြီး သီးသန့် ကုထုံး မရှိသေးပါ။ ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါလက္ခဏာများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားမှု များပြားလေ့ ရှိပြီး ရောဂါ ပြင်းထန်စွာ ခံစားရနိုင်သည့် သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် ဆင်တူသဖြင့် ဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများ အနေဖြင့် အခြားသူများထံသို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်း မရှိစေရန်အတွက် မိမိအား ခြင်ကိုက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်ပါ။
ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေး မရှိသော်လည်း နေအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခြင်နှင့် ခြင်လောက်လန်း နှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းများကို သင်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သင်နှင့် သင့်မိသားစုတွင် ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ် နိုင်ပါသည်။ ခြင်ကျားပေါက်ဖွားမှု မရှိလျှင် ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါသာမက ဇီကာရောဂါနှင့် အန္တရာယ်များသော သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါများပါ မဖြစ်ပွားနိုင်ပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)